Ambassador of Myanmar presents her Credentials to His Excellency Mr. Toomas Hendrik Ilves, President of the Republic of Estonia – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Yin Yin Myint, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Estonia, presented her Credentials to His Excellency Mr. Toomas Hendrik Ilves, President of the Republic of Estonia, on 19 November 2015, in Tallinn.
Dated. 29 November 2015
အက်စ်တိုးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဥ်ယဥ်မြင့် သည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် တာလင်မြို့၌ အက်စ်တိုးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ တိုးမတ်စ် ဟန်ဒရစ် အေးလ်ဗက်စ် ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်